Madaxweynaha Jubaland iyo mucaaradkii aya heshiiska wada galeyn oo Kismaayo lagu soo dhaweeyey | XORRIYA NEWS
Home Wararka Madaxweynaha Jubaland iyo mucaaradkii aya heshiiska wada galeyn oo Kismaayo...
Madaxweynaha Jubaland iyo mucaaradkii aya heshiiska wada galeyn oo Kismaayo lagu soo dhaweeyey
Axmed Madoowe oo ay wehelinayaan xubnahii isbadal doonka Jubbaland ee dhawaan heshiiska ay wada galeyn oo ka dagay gegada duulimaadka ee kismaayo.
Waxaa gegeda duulimaadka ee Mgaalada Kismaayo, Jubbaland gaaray wafdi uu hogaaminaayo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ay wehelinayaan Xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir oo ka mid ah xubnaha isbadal doonka Jubbaland ee dhawaan heshiiska la gaaray Dowlad Goboleedka Jubbaland, ka gadaal markii ay heshiis ku soo wada saxiixdeyn kenya.
Ahmed Madoowe ayaa sidoo kale sheegay in dhibaatada adduunka saamaysay ee Xanuunka COVID-19 ay tahay mushkilad u baahan in dadku ay raacan fariimaha iyo talooyinka Hay’adaha Caafimaadka dalka, maadama aan wali daawo loo haynina inay dadku kala fogaadan si looga hortago in xanuunkan uu ku faafo Bulshada, isagoo xusay in kala fogaanshaha Bulshada ay ka bilaabato Xarumaha Dowlada, dadkuna ay raacaan tilmaamaha iyo talooyinka howlwadeenada Caafimaadka.
Halkaan Hoose Ka Daalaco Sawirada Soo Dhaweynta Wafdiga;
Soo dhaweynta Wafdigii Ahmed Madoowe.